Yiqiniso, kunzima sokuyenga yesimanje izivakashi zokungcebeleka phezu Russian. Lapho nje ithuba lokuya emhlabeni, ukuze bafakaze okujabulisayo futhi ujabulele ngemisebenzi emihle, amaRashiya wathatha ngokunenzuzo. Bayanda kungenziwa abathandi beach ukubonwa e-Turkey, Tunisia, ukujabulela ezinye exotic India neThailand. Kodwa ngaso sonke isikhathi ukukhokhela i iholide ezibizayo baseRussia. Ngaphezu kwalokho, abanye abantu abakwazi ukushiya izwe noma abakwazi akhiphe amaphepha adingekayo. Kodwa lokho akusona isizathu ukuphika ngokwakho lonke. ERussia, zokungcebeleka eziningi kokubili kwi Azov futhi oLwandle Olumnyama futhi yoLwandle iCaspian, kodwa eziningi zazo ziye nje selikhohliwe. Ngempela, iphuzu elithile imboni yezokuvakasha athuthukile ezweni lethu, konke yayingatholakala kusuka iholide - ilanga, ulwandle kanye ebhishi. Njengamanje, isimo sesishintshile ngokuphelele: ngenkuthalo eyakhelwe resort amadolobha kanye resort izindawo, kukhona amahhotela eziningi ezinhle kakhulu, inkonzo ethuthukisiwe, ingqalasizinda athuthukile, amabhishi ifakwe - konke lokhu kudala izimo esihle sokuzilibazisa kuleli zwe. Izivakashi akudingeki passport, kodwa ngenxa izipesheli evumayo of izindiza kanye tour opharetha, kungenzeka ukuba ulondoloze imali ulwandle yabo yalolu hambo. Bonke abathandi beach amaholide, ikakhulukazi Imikhaya enezingane ezisencane uyojabulela ukuphumula Anapa. Kulapha thina ukuthi phakamisa ukuya.
Anapa - resort nabadumile Krasnodar esifundeni, ekahle beach amaholide. Bayanda Anapa ukhethe Imikhaya enezingane ezisencane. isihlabathi esihle Warm, entry engajulile emanzini, amanzi olwandle ukujula engajulile, ngisho at ibanga 10-15 amamitha ukusuka ogwini, ingqalasizinda ezinhle futhi elinamanzi amaningi nenala ukuzijabulisa izingane - ukuthi zonke bayokwazisa abazali yesimanje. Yiqiniso, leli holidi kanye izinga yayo incike izimo sokuhlala. Anapa inikeza ukuhlala okunethezeka aphambili ihhotela noma balale ezindaweni ezizimele, sisuke emsindweni edolobheni. Sifuna ukunikeza izivakashi ezingaba khona futhi amaholide yehhotela "La Boheme" (Anapa), okuyinto won Izibuyekezo esihle beshiya isiminyaminya nesiphithiphithi sasemadolobheni. Ngakho-ke yini imfihlo yakhe empumelelweni? Can ehhotela ezintathu-star ancintisane ongakhetha phesheya?
"Bohemia" Ihhotela (Anapa) - indawo ephelele uphumule bonke labo abafuna ukujabulela ngokugcwele iholide lolwandle. amakamelo kokunethezeka, ngemisebenzi emihle, emnene futhi abasebenzi friendly - konke lokhu kuzodala izimo ezidingekile nokungcebeleka.
indawo Kalula - abakushoyo cishe zonke izibuyekezo mayelana ehhotela "La Boheme" (Anapa). Kwamambala, ngombana Krasnodar Krai Ezokungcebeleka ukuthola emgqeni wokuqala, okungukuthi ngokoqobo ogwini - a rarity. Ngesikhathi esifanayo leli hhotela eduze nenkaba spa edolobheni, ngakho bonke beshiya isiminyaminya nesiphithiphithi sasemadolobheni uzokwazi ukusizakala ingqalasizinda. Ngo kwebanga lokuhamba izitolo ezinkulu, ibhasi isiteshi, emaphakathi emakethe, izingcingo, kanye ezikhangayo zendawo kanye nokuzijabulisa.
Ngokuqinisekile, wonke izivakashi ezingaba abanesifiso ezingeni wenduduzo ukuthi angaletha yehhotela "La Boheme" 3 * (Anapa). Incazelo inikezwe ehhotela kanye nohambo Intanethi, ugcizelela kungenzeka zokuhlala kwelinye lamagumbi ukhululekile 18. Yebo, ihhotela elincane, kodwa izivakashi eziningi ukusho sokuthula nokuzola, okuyinto ebalulekile eholidini. Check-in senzeka egumbini imizuzu 10-15, ngisho noma ngabe zezihambeli ziyafika ngaphezulu ngaphambi kwesikhathi.
Izivakashi bamenyiwe ukukhetha eziningi izigaba ezahlukene:
"Standard" - eyikamelo elilodwa endaweni 15 m 2;
"Junior" - eyikamelo elilodwa endaweni 23 m 2 noma ngaphandle kuvulandi;
"Elibizayo" - indlu enamakamelo amabili suite nge kuvulandi nge endaweni ingqikithi 35 m 2;
"Wedding" - igumbi laba abashadayo, ahlanganise indawo engaba 23 m 2.
Ihhotela sika "La Boheme" (Anapa, Russia) - Anapa ipharadesi, bheka, wonke beshiya isiminyaminya nesiphithiphithi sasemadolobheni kuyodingeka izimo zokuphila kakhulu. Nomaphi lapho inombolo khetha isigaba, kuyoba konke okudingayo eholidini. Okokuqala, ngifuna ukusho i umhlobiso amazing lamakamelo, konke ngengozi: nendwangu ngokuhlanganiswa Umbala izindonga naphansi, ifenisha yesimanje, enhle, ngesikhathi esifanayo esiwusizo futhi elula. Abaningi bathi ngisho kusukela amakamelo awufuni ukuya - ngakho lapha nice ethokomele.
Esikhathini nemibandela likhinyabeze ukushisa ukulondoloza ngisho kushelele fresh kusukela olwandle. Ngakho, ukuze uthole ekamelweni elipholile Ekupholiseni ihlangabezana imodeli enamandla yesimanje. Izivakashi ukusho ukuthi conditioner emoyeni kulula ukuyisebenzisa, kunezinqubo eziningana ezisebenza, ngakho ukuze ubhekane ngokuphumelelayo nalesi imisebenzi ayabelwe at 100%. Satellite TV neze ngokudingeka eholidini, nakuba khona kwakhe kuthandekile izivakashi eziningi. Ukuxhumana abasebenzi ehhotela esetshenziswa efonini, kungashiwo Nokho esetshenziselwa elide ngisho izingcingo zomhlaba jikelele, ekukhokhela. Igumbi ngalinye has a isethi ubuncane izitsha, kanye ngeketela kanye minibar.
A yokugezela ayimfihlo iqoqo amathawula izimonyo edingekayo - into bangathembela wonke isivakashi abeza yehhotela "La Boheme" (Anapa). Zonke amapayipi isebenza, ukwehluleka iye yabonakala e amanzi ashisayo. Iphansi egumbini lokugezela ifakwe uhlelo Ukushisa - okuthile okuyolokhu sasimthanda sonke izivakashi abanquma ukuya Anapa ekwindla noma kwentwasahlobo. Kodwa khona emphemeni ngenxa abakhethiwe asesigabeni. Uma emphemeni ngawe kuyimfuneko, ungeke ucabange ekuseni yakho noma kusihlwa ngaphandle kolwandle, kufanele akhombise izifiso zakho uma ukubhuka.
Intengo kuhlanganisa ibhulakufesi ehhotela, wakha phansi "lezitsha". Ziphakelwa yokudlela ehhotela. Ukudla kwasekuseni kungekho ezihlukahlukene ezahlukene, ngokuvamile wokudla, deli inyama noshizi, cottage shizi, pancake, cheesecakes, kanye itiye nekhofi. Hungry ngokuqinisekile kungabikho muntu. Kwasemini kanye dinner kuba, kodwa ngemali eyengeziwe.
Ihhotela sika "La Boheme" 3 * (Anapa) inikeza amaholide service enhle. Amagumbi bahlanza nsuku zonke, amathawula kanye amashidi baguqulelwa njengoba kudingeka. Izivakashi uthi izinga yokuhlanza: Sula wonke evele amakamelo umoya, sanitary ahlanzekile, ifake uphethiloli embhedeni. Yingakho emakamelweni zihlale zihlanzekile, fresh futhi ethokomele. Abasebenzi isuswe phakathi ukungabi khona izivakashi, ngakho akukho ukuphazamisa ukuthula kwabo uphumule.
holidaymakers Abaningi ezingaba ubani kuphela cabangela yehhotela "La Boheme" (Anapa), nentshisekelo umbuzo Ukufinyelela i-Inthanethi insimu yalo. Ngeshwa, indawo yokungena wireless ngesivinini Inthanethi ikhona kuphela yokudlela ehhotela.
Ngesikhathi yokwamukela ehhotela bonke beshiya isiminyaminya nesiphithiphithi sasemadolobheni uzokwazi bajwayelane uhlelo uhambo, ukuthola ibalazwe eningiliziwe yokungcebeleka, kanye inkonzo Shuttle esiteshini sesitimela noma esikhumulweni sezindiza. Ukuze uthole imali eyengeziwe, izivakashi zingathola ukusizakala kanye service izingubo. Uma ufunda izibuyekezo zezivakashi Okuyınqo, cishe yilowo nalowo kubo zingatholakala kukhulunywa ngezilokotho futhi ukubhekana abasebenzi ehhotela. Lapha iqembu ochwepheshe weqiniso, abakwaziyo ukwanelisa zonke amakhasimende. Mhlawumbe lokhu futhi kuqinisekisa nokuhlola eliphezulu ehhotela.
Ngo Anapa abaningi beze ngemoto kanye ngosuku lokuqala lonke nazo inkinga yokupaka. Ngakho yehhotela "La Boheme" (Anapa) inikeza zonke izimenywa khulula kuqashelwe yokupaka.
Ayikho ku-site ukuzijabulisa, kodwa konke okudingayo ukuze izivakashi, ngokwezwi nezwi isho ukuthi ngaphakathi ukuhamba ibanga. Qiniseka ukuvakashela ipaki yamanzi yendawo, Multiplex. Ebusuku izikhova ngokuqinisekile siyabazisa amakilabhu best in ogwini futhi uvakashele disco lolwandle.
Eliseduze lolwandle sandy elingamamitha angu-200 kuphela. Ugu ezibanzi, isihlabathi esihle, entry engajulile emanzini ukuhlanza kolwandle - into bangathembela wonke beshiya isiminyaminya nesiphithiphithi sasemadolobheni abakhetha yehhotela "La Boheme" for ukuhlala kwakho (Anapa). Beach ifakwe ilanga loungers kanye baphathe nezambulela kungaba kuqashwe for imali eyengeziwe. Lapha, ogwini ukuzijabulisa ngokwanele izingane kanye nabantu abadala, imali yokuqasha evulekile yokuzijabulisa Amanzi kanye nemishini ezemidlalo. Ngenkathi ogwini ukudonsa inetha volleyball ne labetibambile mncintiswano umbukwane phakathi amaholide.
Yiqiniso, wonke izivakashi sizibuza ukuthi inqubomgomo zamanani ithobela Anapa. Ihhotela sika "La Boheme" ngesilinganiso okuyiwona ngokuyinhloko ixhomeke ekutheni egumbini isigaba, ngokwanele yeningi. Izindleko ukuhlala nsuku zonke endlini ejwayelekile iqala ruble 1300, endlini ephindwe kabili nge kuvulandi izobiza ngaphezulu kancane - ruble 2200. Kuhlala ekhatsi suite iqala ruble 3000. Ukuze uthole sikukhokhise inhlawulo, izisebenzi ihhotela lizokubuyisela ukuhlobisa ikamelo nge-champagne, rose amacembe namakhandlela - ngokuvamile umhlobiso wathenga abashadayo.
Ngakho, yehhotela "La Boheme" 3 * e Anapa - indawo ephelele uphumule. Owawakhiwe endaweni enhle prime, ihhotela banganikeza yokuhlala ukhululekile futhi ngemisebenzi emihle. Uma sbiralsya kuphela eholidini futhi inqubo yokukhetha okuhle kakhulu, qaphelani leli hhotela. Sifisela wena kokuhlala ezimnandi!